HAMRAKHABAR | » रुकुमको घटना काेरियाली मिडियामा पढेपछि काेरियालीले के सम्म भने ? रुकुमको घटना काेरियाली मिडियामा पढेपछि काेरियालीले के सम्म भने ? – HAMRAKHABAR
रुकुमको घटना काेरियाली मिडियामा पढेपछि काेरियालीले के सम्म भने ?
मीन विक दक्षिण काेरिया
कानुनी राज्यकै खिल्ली उडाएर जातिय विभेदका कारण रुकुमको चौरजहारी घटनाले यतिबेला नेपाल तातिरहेको बेला कोरियाली राष्ट्रिय स्तरको मिडियाले कभर गरेपछि रुकुम घटनाले कोरियाली जनताहरुलाई आश्चर्य चकित बनाएको छ । यो न्युज कोरियाको सामाजिक संजालमा भाईरल बनेको छ । न्युज पोर्टलको उक्त साईटमा लाखौंले हेरेका छन भने हजारौंले प्रतिक्रिया जनाएका छन । उक्त न्युज पोर्टलले “अन्तरजातिय बिबाह गर्न खोज्दा ६ जना दलितहरुलाई नदिमा खसालेर मारियो ” भन्ने शीर्षक राखेको छ भने सिधै तल लेखिएको छ “दलित युवाहरुको दु:खद निधन” । उपल्लो जातको केटिसङ्ग तल्लो (दलित )जातको केटिले प्रेम बिबाह गर्न खोज्दा दलित युवासहित ६ जनालाई गाउँलेले कुटेर खोलामा बगाईदिएको स्पष्ट लेखेको छ ।
तर भिखारी पनि देशको एक सिपाही हो जसले देशको लागि आफ्नो काँध थापिदिन सक्छ भन्ने कुरा यहाँका मान्छेले बुझ्दैनन र बुझ्ने वाला पनि छैनन। केहिले लेखेका छन “नेपाल जातलब्यबस्थाले गर्दा नै बिकास हुनबाट पिछडिएको छ अझै धेरै बर्बाद हुनेछ” । नेपाल भ्रमण गरेर फर्केका एक जनाले लेखेका छन “नेपाल घुम्न जानुभयो भने तपाई धेरै शताब्दी अगाडिको अनुभुती गर्न पाउनुहुनेछ कुनै किताब पढनै पर्दैन । ” अर्का एक जना भन्छन वास्तबमै यो एक अबिकसित देश हो मैले लामो समय नेपालमा बिताएको छु केही बच्चाहरु सडकमा दिसापिसाब गर्न बाध्य भएकोले मरिरहेका छन । यो देखेर म लामो समय कोठामै रोएर बिताएको थिएँ ।” त्यसैगरी अर्का एक जना लेख्छन हाँस्दै कुकुरहरु लागी रहेको छ यी मानिस नै होईनन । यस्तो देश जहाँ मान्छेहरु बाँच्न पाउदैनन । कसरी बुद्दको देश भनेर भन्नू पागलहरुको देश ।